Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Hal qof ayaa dhintay, tobanaan ayaa lagu la'yahay masiibo laba doon ah oo ka dhacday Hindiya
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • saaciday inay • Wararka Hindiya • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Tobaneeyo qof ayaa la la'yahay kadib markii ay isku dhaceen laba doonyood oo ku degtay Majuli, India.
Laba doonyood oo kuwa rakaabka ah ayaa isku dhacay Hindiya.
Doon yar oo rakaab ah ayaa ku qalibantay shilka Hindiya.
Ugu yaraan hal qof oo rakaab ah ayaa ku dhintay musiibo.
Laba doonyood oo kuwa xamuulka ah oo si xad-dhaaf ah u raacay oo u kala safrayay jihooyin ka soo horjeeda ayaa maanta isku dhacay webiga Brahmaputra oo dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Jorhat, oo ku taalla gobolka Assam ee waqooyi-bari Hindiya.
Sida la sheegay, waxaa saarnaa doonyaha in ka badan 100 qof, iyadoo badankood weli la la'yahay lagana cabsi qabo inay dhinteen.
Muuqaallo ku baahaya internetka ayaa muujinaya doon weyn oo aad u culus, taas oo siday rakaab iyo sidoo kale tiro baabuur ah, oo ku burburtay doon yar oo rakaab ah.
Yar yar gawaarida degtay isla markii shilku dhacay, oo biyo hoos marayay ilbidhiqsiyo gudahood shilka ka dib, fiidyow dhibsanaya oo sida muuqata uu toogtay qof rakaab ah oo saarnaa doonyaha waaweyn. Dadku waxay ka soo yaaceen doontii degtay, alaabtoodii ayaa dul sabaynaysa.
Wali lama hayo xog ku saabsan khasaaraha ka dhalan kara.
Doomaha ayaa si weyn loogu isticmaalaa gaadiidka gudaha Hindiya. Shilalka doontu waa wax caadi ah sababta oo ah ciriiriga joogtada ah iyo heerarka dayactirka iyo badbaadada oo liita.